Dowladda Federaalka oo sheegtay in 120 xubnood oo Shabaab ah ay ku Dishay Hiiraan | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka oo sheegtay in 120 xubnood oo Shabaab ah ay ku Dishay Hiiraan
BELEDWEYNE –Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dileen howl-galadii ka socday Gobolka Hiiraan ee soo bilowday 14-kii bishaan 120 ka tirsan Maleeshiyaadka Alshabaab oo ay ku jiraan saraakiil sar-sare, waxayna intaa ku dareen inay gacanta ku dhigeen tiro kale oo katirsan kooxdaasi.
Taliyaha guutada 52-aad ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay Ciidamadaoo kaashanaya kuwa AMISOM ay kooxda Alshabaab kala wareegeen Deegaanno farabadan oo ay kooxdu ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobololka Hiiraan.
Taliyuhu wuxuu kaloo sheegay in howl-galada ka socda dhulka buuraha ah ay sii socon doonaan, oo aysan Ciidamadu Qaranka ka soo bixi doonin Deeganadaasi gacanta lagu dhigay ayna baaqi ku sii ahaan doonaan.
Taliyahe Tareedisho wuxuu shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Hiiraan uga mahad-celiyay garab istaagii ay u muujiyeen Ciidamadooda Qaranka iyo sidii ay ula shaqeeyeen, isagoo ugu sii baaqay shacabka inay halkaasi kasii wadaan garab-istaagaasi taasoo uu sheegay inay keeneyso in kooxdaasi weyso meel ay ku harsato,islamarkaan weydo meel ay ku dhuumaaleysato.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Ayaa horay ugu dhawaaqay guluf ka dhan ah kooxda Alshabaab, taasoo keentay in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya oo kaa shanaya saaxiibada Caalamka ay Howl-gallo qorsheysan ka fuliyaan qaar kamid ah Gobolada Dalka.